भारतमा साढे ३५ सयमा कोरोना, ९९ को मृत्यु - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या साढे ३५ सय नाघेको छ ।
आइतबार बिहानसम्म त्यहाँ ३ हजार ५ सय ८८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
त्यहाँ शनिबार मात्रै १३ जनाको ज्यान गएको छ । योसँगै भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९९ पुगेको छ ।
कनु देशमा कति संक्रमित ? कतिको मृत्यु ? सूचीसहित हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
याे पनि पढ्नुस दिल्ली हिंसाः ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १३ पुग्यो, उत्तर प्रदेश र हरियाणाको सीमामा निगरानी कडा